“အတွေးစလေးတွေ”: ဒုံရင်း အစ်စ် ဒုံရင်း . . .
ဒုံရင်း အစ်စ် ဒုံရင်း . . .
ပို့စ်မတင်ဖြစ်တာ တစ်လနီးပါးတောင် ရှိသွားပါပေါ့လား။
ပို့စ်မတင်ဖြစ်ဆို လွန်ခဲ့တဲ့လတုန်းက စိတ်ကူးချိုချိုက စာအုပ်ဈေးပွဲတော်ဆိုပြီး စာအုပ်လာရောင်းတာနဲ့ ကြုံတာကြောင့် စာအုပ်တွေ နွားငတ်ရေကျ ၀ယ်ထားဖြစ်လိုက်သကိုး။ ပင်ရင်းစာအုပ်တိုက်ကတော့ အနှီလို နယ်လှည့်ရောင်းတဲ့လူတွေကို မူရင်းတန်ဖိုးရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ပေးပြီး တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းတဲ့အခါ ၅ ရာခိုင်နှုန်းကော်မရှင်ပြန်လျှော့ရောင်းဖို့ မူချထားလေရဲ့။ ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်ကျော်က ဖြိုးသာရလာရောင်းတဲ့ ပထမဆုံးအခေါက်ကပဲ ကော်မရှင်လျှော့ပေးတာကြုံဖူးသား။ နောက်တစ်ခါထပ်လာတော့ ဖြိုးသာရလည်း စာတတ်သွားတယ်ထင်ပါ့။ တိုက်ထုတ်ဈေးအတိုင်းပဲ ချပါလေရော။ နောင်နှစ်နောင်နှစ်တွေကျတော့လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ ကြိတ်တော့တာပါပဲ။ အံမယ် သူရို့ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်က စိတ်ကူးချိုချိုစာအုပ်တိုက် စာအုပ်အထူးလျှော့ဈေးရောင်းပွဲတော်လို့ ရေးထားတာကို နယ်လှည့်အရောင်းသမား သကောင့်သားတွေက ဘယ်လိုလုပ်ကြတယ်မှတ်လဲ။ အထူးလျှော့ဈေးဆိုတဲ့ စာလုံးတွေကို တိပ်နဲ့ကပ်ပြီး ပိတ်ထားလိုက်သဗျား။ ဈေးကွက်နည်းဗျူဟာ ဘယ်လောက်မြင့်လိုက်သလဲ။ မကျေနပ်လည်း မ၀ယ်ရုံပ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တိုက်ထုတ်မူရင်းဈေးအတိုင်း ၀ယ်ရတာကိုပဲ ဦးဟန်ကြည်တို့က ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးသား။ အနှီလိုမှမဟုတ်ရင် တစ်ဆင့်ခံ၊ နှစ်ဆင့်ခံအရောင်းသမားတွေဆီမှာ မတန်တဆဈေးနဲ့ ၀ယ်နေရတာကိုး။
စာအုပ်တွေ အငမ်းမရဖတ်နေရလို့ စာရေးကြဲတာလား ဆိုပြန်တော့လည်း အနှီတစ်ခုတင် မကပြန်ဘူး။ အစိုးရပညာရေးပြက္ခဒိန်အရဆိုရင် နောက်လာမယ့် ဇွန်လဆန်းမှ ပညာသင်နှစ်သစ်စပေမယ့် ဦးဟန်ကြည်တို့ အပြင်ကျောင်းတွေရဲ့ ပညာသင်နှစ်ကတော့ ဧပြီလကတည်းက စလေရဲ့။ အနှီတော့လည်း လာလတ္တံ့သော အနာဂတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်လောင်းလေးတွေနဲ့ ဦးဟန်ကြည်နဲ့ကတော့ တစ်နှစ်တာလုံး မပြတ်တမ်းထိတွေ့နေရရော ဆိုပါစို့။ သူရို့တွေ တစ်သက်လုံးက အရိုးစွဲလာတဲ့ Parrot learning နဲ့ Spoon feeding education ကြီးကို အမြစ်ကချွတ်ပြီး အရေခွံလဲပေးတဲ့အလုပ်ကို စာသင်နှစ်ရဲ့ ပထမလနဲ့ ဒုတိယလ နှစ်လလုံးလုံး အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်နေရတာကလည်း စာရေးကြဲရခြင်းရဲ့ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုပေါ့လေ။ အမှန်တော့ အကြောင်းပြဖို့လည်း သိပ်တော့ မလိုပေါင်ဗျာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဦးဟန်ကြည်ကိုယ်၌က မီဂါစတားဘလော့ဂါကြီးမှ မဟုတ်ပေပဲ။ သာမညောင်ည ဘလော့ဂါပေါက်စလေးမို့ ရေးချင်ရေး၊ မရေးချင်နေ ဘယ်သူမှ အာရုံမထားတာ သေချာပါ့။ သို့ပေတဲ့ အနှီလိုလေး ကြော်ငြာဝင်လိုက်တော့ အခုမှဘလော့လာလည်ဖူးတဲ့ မိတ်ဆွေများက ဟယ်…သည်တစ်ယောက်ကဖြင့် တကယ့်မဟာ့မဟာ ဂရိတ်စူပါ ဘလော့ဂါကြီးထင်ရဲ့လို့ ထင်တစ်လုံးရသွားရင်လည်း မနိပ်ပေဘူးလားဗျာ။
အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း စာသင်နှစ်တစ်ခု စပြီဆိုတာနဲ့ လက်ရွေးစင်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေ ဆားပုလင်းဦးဟန်ကြည်ဆီကို ရောက်လာကြပါလေရော။ ဆားပုလင်းဆိုတော့ အနှီဆရာအတော်ငန်မယ်ထင်ရဲ့လို့လည်း အတွေးမချော်လေနဲ့ဦး။ ဘိလပ်လို Surveillance ငါးပိလို ဆားပုလင်းဆိုတာက လူဆိုးထိန်းလို့ အနက်တွင်တာမို့ ဆားပုလင်းဦးဟန်ကြည်ဆိုတော့ လူဆိုးထိန်းဦးဟန်ကြည် မည်ပါသတဲ့။ ဆားပုလင်းဆိုတဲ့အတိုင်း ပညတ်သွားရာဓာတ်သက်ပါချက်ကတော့ လက်ရွေးစင်တပည့်တွေနဲ့ပဲ နပမ်းလုံးနေရတော့တာကိုး။
အဘိဓာန်ထဲမှာ လက်ရွေးစင်ဆိုတာကို ဘယ်လိုအနက်ဖွင့်ထားတယ်တော့ မပြောတတ်ဘူး။ ဦးဟန်ကြည်ရဲ့ လက်ရွေးစင်ဆိုတာကတော့ သူများတကာတွေ စိတ်ကြိုက်ရွေးထုတ်ပြီးလို့ စင်ကျန်ခဲ့တဲ့ သကောင့်သားတွေကို ဆိုပါသတဲ့ဗျား။ အနှီတော့လည်း ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်လေးတွေကို ကျောင်းစာတစ်ခုထဲတင်မကဘဲ စိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်းအစ၊ဗဟုသုတကအလည်၊ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေးအထိ ဖြည့်ပေးနေရတော့ ဆရာရည်၊ ဆရာသွေးကတော့ ဘာတက်သလဲမမေးနဲ့။ ဖတ်သမျှစာကလည်း အနှီပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေအတွက်၊ ရေးသမျှစာကလည်း အနှီပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေအကြောင်းက မကင်းရုံတင်ဘယ်ကလိမ့်တုန်း မက်တဲ့အိပ်မက်ထဲမှာတောင် သကောင့်သားလေးတွေကိုချည်း စိတ်စွဲပြီး ဆုံးမသြ၀ါဒစကားခြွေနေရလွန်းနေလို့ အိမ်ရှင်မတောင် အိပ်မက်ထဲမှာတောင် နေရာမရရှာဘူးရယ်။
Punk ကေဟုခေါ်သတတ် . ..
တပည့်အများစုကလည်း ဆားပုလင်းဦးဟန်ကြည်ဆီမရောက်ခင်အချိန်အထိက ဒီဘက်ခေတ် ချာတိတ်တွေဒီဇိုင်းက အပြည့်ဗျား။ အနောက်တိုင်းမှာ Punk လို့ခေါ်တဲ့ အစုတ်ပလုတ်၊ အပေအတေ၊ ကလေကချေ၊ အုတ်ကြားမြက်ပေါက်၊ ခြုံကြားချေးယို၊ ဓာတ်တိုင်သေးပန်း၊ အလှူရှိမှထမင်းစား ( ဘာသာပြန်တာ နည်းများနည်းနေရော့သလားမသိ ) ဒီဇိုင်းတွေကိုမှ မက်မက်စက်စက် အားကျတဲ့ ကလေးတွေက ပါသေးသဗျား။ အမေရိကန်အကျဉ်းထောင်တွေမှာ ယောက်ျားချင်းလိင်တူဆက်ဆံဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သင်္ကေတအဖြစ်နဲ့ ဘောင်းဘီကိုတစ်ဝက်လျှောပြီး အတွင်းခံဘောင်းဘီ လက်တစ်ဝါးလောက် ပေါ်အောင်ဖော်ပြထားကြတာကို ဘုမသိ၊ ဘမသိနဲ့ ဇွတ်ရောအတင်းပါ အတုခိုးတဲ့ ငတိလေးတွေလည်း ပါလိုက်ချေသေး။ မှတ်မိသေးရဲ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်လောက်က တပည့်တစ်ယောက်က ဦးဟန်ကြည်ကို ဆရာတဲ့ ဂျစ်ပဆီတွေ မိုက်တယ်နော်တဲ့ ကျွန်တော်သဘောကျတယ်လို့ အဆိုတင်သွင်းပါလေရော။ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကို ဂဃနဏမသိဘဲ စွတ်ရွတ်ပြီး ထောက်ခံတဲ့ မ၊ဆ၊လ သောက်ကျင့်ကို အင်မတန်မှ မြင်ပြင်းကတ်တဲ့ ဦးဟန်ကြည်က ဟုတ်ပါပြီဗျာ…ခင်ဗျားသဘောကျချင်လည်းကျပါ…ဒါနဲ့နေပါဦး Gypsy ဆိုတာ ဘာလဲ သိရဲ့လားလို့ မေးလိုက်တော့ ကိုယ်တော်မြတ်က ဘယ်သိလိမ့်တုန်း။ အနှီတော့မှ ဦးဟန်ကြည်က စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ Gypsy ဆိုတာ အမေရိကန်မှာ နေစရာအိမ်ခြေယာခြေ မရှိလို့ လျှောက်သွားနေရတဲ့ လူမျိုးစုတွေဟေ့…မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ သူတောင်းစားတွေလိုမျိုးပေါ့လို့ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ရှင်းပြလိုက်မှပဲ ကိုယ်တော်မြတ်ပါးစပ်က ဂျစ်ပဆီသံ ပျောက်ပါလေရော။ တတ်နိုင်ဘူး။ ဒီက ဆရာလုပ်သူကလည်း မပြောမှနေရော၊ ပြောလိုက်ရင် ပိဿာလေးနဲ့ နံဘေးကို အားရပါးရ ပစ်ထည့်လိုက်သလို ဆော်ရမှ ကျေနပ်တဲ့ လူမျိုးဖြစ်နေတာကိုး။
Ready ပဲတဲ့ ကိုယ့်ဆရာ . . .
အနှီသကောင့်သားလေးတွေကို သူရို့အားကျတဲ့ သတ္တ၀ါတွေဟာ ဘယ်လိုသတ္တ၀ါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်အောင် စကားလုံးပြင်းပြင်းနဲ့ နှစ်ခါလောက် ရှင်းပြလိုက်ရင်တော့ ကိုယ်တော်မြတ်များ အစွဲကျွတ်တာများပါရဲ့။ ကိုယ်တိုင်က အညာသားဖြစ်နေတာမို့ စကားပြောတဲ့အခါ နာမ၀ိသေသန၊ ကြိယာဝိသေသနတွေကို အားရှိအောင်ရွေးပြောတတ်တဲ့ ဗီဇရှိနေတော့ ခပ်ကောင်းကောင်း။ ကလေးတစ်ယောက် ဘောင်းဘီဖင်လျှောဝတ်လာရင် အထီးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမပဲဖြစ်ဖြစ် “ ဟေ့ ဘောင်းဘီတင်ဝတ်စမ်း ဖင်ထဲကို ကြွက်ဝင်သွားမယ် ” လို့ အော်ရတာပ။ အနှီလိုမှ အော်လို့ သဘောမပေါက်ဘဲ အခွက်ပြောင်နေသေးရင် ဦးဟန်ကြည်က နောက်ဆုံးဆေးသုံးပြီး တပည့်တွေကို “ ဟေ့ မင်းတို့ စတိုးဆိုင်တွေ ရောက်ဖူးလားကွ ” လို့ မဆီမဆိုင်မေးရော။ ငတိလေးတွေလည်း မျက်စိကလည်ကလည်နဲ့ “ ရောက်ဖူးပါတယ်ဆရာ ” လုပ်ရတာပ။ ကလေးတွေဆီက အနှီလိုအဖြေရရင် “ စတိုးဆိုင်တွေမှာ ရောင်းချင်တဲ့ ပစ္စည်းကို လူမြင်အောင်ပြသလား၊ လူမမြင်အောင် ၀ှက်ထားသလား ” ဆက်လုပ်ပါလေရော။ တပည့်တွေကလည်း “ လူမြင်အောင် ပြရပါတယ်ဆရာ ” ပေါ့လေ။ အနှီတော့မှ “ သြော်…ဒါဆိုရင် မင်းတို့တွေ ဘောင်းဘီဖင်လျှော ၀တ်တာကလည်း စတိုးဆိုင်တွေမှာလုပ်သလို ရောင်းကုန်ကို လူမြင်အောင်ပြတာလား ” လို့ အပြီးသတ်အုပ်ထည့်လိုက်မှ လဒလေးတွေ အမြီးကုပ်ပြီး အကျင့်ပျောက်ကြပါလေရော။ ဟုတ်သလေ။ တကတည်း ဘောင်းဘီနောက်ပိုင်းကို တလျှောတည်းလျှောပြီး မမြင်မြင်အောင်ပြနေမှဖြင့် ရောင်းကုန်မို့ လူမြင်အောင်ပြတာပေါ့။ ဒီ့အပြင်ဘာရှိရဦးမလဲဗျာ။
ယောက်ျားဖြစ်ပြီး လက်သည်းအရှည်ထား၊ နားကပ်ဝတ်၊ လက်သည်းဆိုးပြီး ဦးဟန်ကြည်တို့ တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ်မှာ မိန်းမစီးဖိနပ်လို့ သိထားတဲ့ “ ယင်းမာ ” ဖိနပ်ကိုစီးထားတဲ့ သကောင့်သားများကိုတွေ့ရင် ဦးဟန်ကြည်က “ ဟေ့ … ဘော်လီဝတ်ခဲ့လား ” လို့ မေးတာပဲ။ ဒါနဲ့တောင် မရသေးရင် “ ယောက်ျားဖြစ်ရင် ယောက်ျားအ၀တ်ဝတ်ပြီး ယောက်ျားလိုနေစမ်းပါကွာ…မီးယပ်နဲ့ သွေးဆုံးမကိုင်ချင်စမ်းပါနဲ့ ” လို့ ဆက်ပြီးတွယ်ရတာပ။ တွယ်ရက်တယ်လို့လည်း မထင်လေနဲ့။ ဒီဘက်ခေတ်မှာက အခြောက်ဏှာဗူးတွေက ခပ်များများ။ လူလေးတွေကြည့်ရင် ဖင်လေလျှော့ထားသလို ဖင်ရှူးလေးတွေနဲ့၊ ဘာကဘာမှန်းခွဲမရအောင် ခြေသလုံးနဲ့ပေါင် ၀မ်းဆက်ဖြစ်နေတဲ့ ခနော်နီခနော်နဲ့ ဖရိမ်နဲ့၊ စကားပြောရင် ကနွဲ့ကလျနဲ့ လုံးရာကပြားတဲ့ ဒီဇိုင်းဖြစ်နေပေမယ့် အမမြင်ရင် ဖြူသောမည်းသောမရှောင်ငမ်းချင်၊ အခွန်မဆောင်ရတိုင်း ဖွန်ကြောင်ချင်တဲ့ ငတိတွေချည်းမြင်မြင်နေရတော့ အလိုလိုမှ စိတ်မကြည်ရတဲ့ကြားမှာ ကိုယ့်တပည့်က အနှီလိုပုံဖမ်းလာရင် ဘာပြောကောင်းမလဲ ဒေါသတွေထွက်လိုက်သမှ အချောင်းလိုက်၊ အတောင့်လိုက်။ ယောက်ျားဆိုတာ “ ဗလငါးတန် ” ပြည့်စုံရမယ်လို့ မှတ်ထားဖူးပါရဲ့။ ဘယ့်နှာ ဒီခေတ်ရောက်မှ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို သူများက လာစော်ကားလို့ ပြန်တိုက်ချင်ရင်တောင် လက်ပစ်ဗုန်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်ပြီးပစ်ရမယ့် မဟာ့မဟာဘုရားစူး ပုရိသကောင်းကြီးတွေ များသထက်များလာရင် ဦးဟန်ကြည်သမီးမွေးလို့မှ ပေးစားစရာ ယောက်ျားမရှိပေဘူး။
အ၀တ်အစားတင် ဘယ်ကလိမ့်တုန်း။ ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေ အရွယ်မရောက်ခင် ရည်းစားထားကြ၊ လင်ယူသားမွေးတဲ့ အလုပ်ကို အာရုံစူးစိုက်ကြတာတွေကိုလည်း ဒီစာသင်နှစ်အစမှာတင် သြ၀ါဒတရား တွင်တွင်မြွက်ကြားပြီး ဆုံးမရသေးသပဗျာ။ ဦးဟန်ကြည်တို့ခေတ်က ကျောင်းသားအရွယ်မှာ ရည်းစားထားတယ်ဆိုတာ အတော့်ကို ဂျပိုးကျတဲ့ အကောင်တွေမှ လုပ်တာကလား။ အနှီကောင်မျိုးကိုလည်း ကျောင်းသားအများစုက ၀ိုင်းပယ်ထားတာမို့ သူရို့ခမျာ ခပ်ကုပ်ကုပ်လေး နေကြရတာကလား။ ဒါပေမယ့် ဒီဘက်ခေတ်ကျတော့ မဟုတ်ပေါင်ဗျာ။ မှတ်မိပါသေးရဲ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရှစ်နှစ်ကျော်က ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ လွယ်အိပ်ထဲမှာ ရည်းစားစာတွေ့လို့ သူ့မိဘကို ပြောမိတော့ မိဘက ဘာပြေတယ်မှတ်လည်း။ “ ဆရာရယ် ” တဲ့ “ ဒါကတော့ ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်ကလည်း ထားခဲ့တာပါပဲ ” တဲ့ ။ သေရော။ ပြောတဲ့မိဘက ကျောင်းဆရာမဗျား။ အဲဒီမှာ နှစ်ခါပြန်သေရော။ ဒါတင်ဘယ်ကလိမ့်လဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်တုန်းကတော့ တပည့်မတစ်ယောက်က ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ။ “ ဆရာရယ် ” တဲ့ “ သမီးတို့ရည်းစားထားတာ ဘာဘာညာညာမဟုတ်ပါဘူး ” တဲ့ “ ရင်ခုန်ကြည့်တာပါ ” တဲ့။ ဦးဟန်ကြည် ဒေါပွလိုက်တာမှ ဘာပြောကောင်းမလဲ။ တပည့်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်သမီးသာဆိုရင် နေရာမှာတင် ဖနောင့်နဲ့ပေါက်သတ်တယ်။ သူရို့ဟာက ရင်ခုန်ရုံတင်မကဘဲ ဟိုဒင်းအ၀ှာပါ ခုန်နေကြတာ ဒီကဆရာလုပ်တဲ့လူ မသိရင်ခက်မယ်။ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ “ အေး နင်တို့ဖာသာ ရည်းစားထားချင်ထား၊ မထားချင်နေ၊ တစ်ခုပဲ မှတ်ထား မိမိပစ္စည်း၊ မိမိတာဝန် ပဲ ” လို့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပြောထည့်မိပါရော။ ဟုတ်သလေ။ ခေတ်ကိုက ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ် တန်ဖိုးမထားတဲ့ခေတ်။ အနှီအချိန်ကစပြီး “ မိမိပစ္စည်း၊ မိမိတာဝန် ” ဆိုတဲ့ စကားက ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မပြောမဖြစ် ထည့်ပြောရတဲ့ သြ၀ါဒ ဖြစ်ပါလေရော။
ဦးဟန်ကြည်တစ်ယောက် ပါးစပ်ကနေ အမြှုပ်တစီစီထွက်ပြီး လိပ်ခေါင်းပါထွက်မတတ် ဆုံးမနေပေမယ့် ခြောက်တန်းလောက်ကတည်းက ရည်းစားထားလာတဲ့ ကလေးတွေကိုကျတော့ ဘယ်ဆုံးမလို့ ရတော့လိမ့်တုန်း။ သူ့ရောဂါက ကျွမ်းနေမင့်ဟာ။ သြ၀ါဒနဲ့ နားဝေးချက်ကတော့ ရှင်တော်ဘုရားရဲ့ တရားရေအေးတိုက်ကျွေးတာတောင် နားထဲမ၀င်နိုင်တဲ့ ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်က တီကောင်တွေနဲ့တောင် ထူရဲ့။ အနှီလိုသတ္တ၀ါမျိုးလေးတွေကျတော့ “ အေး မင်းတို့က လူမှန်းသိကတည်းက ရည်းစားထားတဲ့ သောက်ကျင့်ရနေတော့ ဆရာလည်း မတတ်နိုင်ဘူး…တစ်ခုဘဲရှိတယ် မကောင်းတာလုပ်စားတဲ့ မိန်းမထက်တော့ အဆင့်မနိမ့်စေနဲ့ ” လို့ ခပ်ပြောင်ပြောင်နှိပ်ရပြန်ရော။ ပါးချင်တဲ့နေရာပါးပြီး ထူချင်တဲ့နေရာကျတော့ သူမတူအောင် ထူကြတဲ့ ကလေးတွေက ဆရာလုပ်သူကို မျက်စိလေးတွေ ပေကလပ်ပေကလပ်နဲ့ ဘုမသိဘမသိမော့ကြည့်နေမှ “ မှတ်ထားကွ…မကောင်းတာလုပ်စားတဲ့ မိန်းမက အနှီကိစ္စအတွက် ပိုက်ဆံရသကွ…ရည်းစားထားပြီး လင်မယားလိုနေတဲ့ သတ္တ၀ါမများကျတော့ အနှီကိစ္စအတွက် ပိုက်ဆံမရတဲ့အပြင် ကိုယ့်အိတ်ထဲကပိုက်ဆံပါကုန်သေးတယ်…ဒါကြောင့် အနှီဟာမတွေက ကြက်ထက်နိမ့်တယ် ” လို့ ရှင်းရှင်းနဲ့ ဘွင်းဘွင်းကြီးကို ပြောထည့်ရတာကလား။ ဒါလောက်ပြောတာမှ နားမ၀င်၊ မလိုက်နာရင်တော့လည်း အသက်စွန့်ပြီးလာကယ်တာကို လက်မခံတဲ့ စောလူးမင်းကို ကျန်စစ်သားမင်းကပြောသလို
“ ဒီလောက်ကယ်တာတောင်မှ အကောင်းမထင်တဲ့ မင်းဆိုးမင်းညစ်…ရန်သူ့လက်မှာ ခွေးသေသေရစ်ပေတော့ ” ပြောပြီး ပစ်ထားရုံပဗျာ။ ဒီ့ထက်တော့လည်း ဦးဟန်ကြည်တို့ မတတ်နိုင်ပေဘူး။ အနာဂတ်ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်လေးတွေကို လမ်းမမှားအောင် ဆုံးမရတာ၊ ပဲ့ပြင်ရတာနဲ့တင် ဦးဟန်ကြည်မှာလည်း ပါးစပ်အတော်မိုက်ရိုင်းနေရပြီကော။
ဦးဟန်ကြည်တစ်ယောက် ကိုယ့်ပညာ၊ ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာ ( မများပေမယ့် နည်းတော့လည်း မနည်းဘူးပေါ့လေ ) ကိုမှမထောက် ကလေးတွေကို မကြားဝံ့မနာသာစကားလုံးတွေနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆုံးမလှချေလားလို့ အပြစ်တင်မစောလေနဲ့ဦး။ အနှီစကားတွေက ကိုယ့်ခေတ်တုန်းကသာ မကြားဝံ့မနာသာရယ်။ ဒီဘက်ခေတ်မှာဖြင့် ငါးတန်းအရွယ်လောက်ရောက်ရင် အထီးအမ သံဝါသအမှုကိုတောင် ကောင်းကောင်းကြီး နားလည်ကုန်ကြပြီဗျား။ ကျန်တာတွေ ဘယ်လောက်သိနေကြမယ်ဆိုတာတော့ ကိုယ့်ဖာသာပဲ စဉ်းစားယူပေရော့။ ဒီတော့လည်း အိုးရွဲ့နဲ့တန်အောင် စလောင်းရွဲ့ပဲ ဖုံးပေးရတော့တာပ။ ကြာတော့လည်း ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ပြန်စဉ်းစားမိရင် သိပ္ပံမောင်ဝရဲ့ “ အင်းလေလံ ” အစမ်းစာထဲက စာတစ်ပိုဒ်ကိုပဲ ပြေးပြေးသတိရပါရဲ့။ သူ့စာပိုဒ်က -
“ မောင်လူအေးကား ယခင်ကမောင်လူအေးတည်း။ ယခုမူကား မောင်လူအေးမဟုတ်တော့ပြီ။ လူကြမ်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီး လူသရမ်းဖြစ်နေပြီတကား ” ဆိုလား။ ။
ဒီပို့စ်နဲ့ဆိုရင် ဦးဟန်ကြည်ရေးခဲ့သမျှ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပို့စ် ၁၀၀ ပြည့်ပါပြီ။ ရာပြည့်ပို့စ်အတွက် ဟိုဟာရေး၊ သည်ဟာရေးနဲ့ အကြောင်းအရာပေါင်းစုံရေးဖြစ်ပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့လည်း ဒုံရင်း အစ်စ် ဒုံရင်း မူအတိုင်း နောင်တစ်ခေတ်ရဲ့ အောင်စစ်သည် ( ဟုတ်ပေါင် ) မျိုးဆက်သစ်၊ ဦးဟန်ကြည်ရဲ့ တပည့်ချစ်တွေအကြောင်းပဲ တင်မိပါရောလား။ တတ်နိုင်ဘူး။ ဦးဟန်ကြည်မှာလည်း ပညာရေးလောကသားဖြစ်ကတည်းက လူမှုရေးရယ်လို့တောင် သိပ်မှမရှိတာကလား။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုတော့လည်း ကိုယ်နဲပတ်သက်နေတဲ့ ပညာရေးနဲ့ လူငယ်တွေအကြောင်းပဲ ရေးရတာပဗျာ။
Posted by Han Kyi at 11:07:00 am
ဒင်းတို့က လူစာအရင်မရှာဘူး။ ဟ၀ှာစာ အရင် ရှာကြသလို ဖြစ်နေတယ်။
အင်းးးး ပြောတာ ပြောရတယ်။
သူရို့အရွယ်လောက်မှာ ဒီကိစ္စတွေ မလုပ်ခဲ့မိရင် သူကြီးမင်းလို ကြီးတောင့် ကြီးမား အရွယ်ကျရင် မခက်လား။း)
ဆက်လက်ပြီးသာ သြ၀ါဒချွေ ဆရာရေ့။ သြ၀ါဒချွေရမှာက ဆရာ့တာဝန်။ နားမထောင်ဘဲ လုပ်ချင်တာ လုပ်ရမှာက သူရို့တာဝန်။ ဟာ ဟ။
23 May 2012 at 13:07
လာလည်ဖတ်ရကျိုးနပ်တယ် လင့်တက်မှာရောက်ဖြစ်ပေမယ့် ဆရာပိုစ့်ကိုမျှော်နေတာပါ အခုလိုဖတ်ခွင့်သိခွင့်ရလို့
23 May 2012 at 13:11
အနာဂတ်ပုံရိပ်ကို ဖော်ကြူးမဲ့ သူတွေကို တကယ်အားမရဖူးဗျာ တွေးကြည့်ပြီးရင်မောတယ်
အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကြောင့် စာရေးကြဲတာပဲ ဦးဟန်ကြည်ရယ် လေးစားပါတယ်။ ဆားပုလင်းဦးဟန်ကြည်နဲ့ လက်ရွေးစင်တပည့်များအကြောင်း၊ ဘောင်းဘီလျှောဝတ်တဲ့ သင်္ကေတအကြောင်းလေးတွေက စိတ်ဝင်စားစရာ။ 'ဒုံရင်း is ဒုံရင်း' တစ်ပုဒ်ဆိုလည်း တစ်ပုဒ်နဲ့တန်အောင် ဖတ်ခဲ့ရလို့ ကျေးဇူးပါ ဦးဟန်ကြည်ရေး)
ဆရှာ့ ဆီ အလည်လာရင် ရိုရိုကျိုးကျိုးကလေးလာမှပဲး) မဟုတ်၇င်တော့လား မလွယ်ရေးချ မလွယ် ။
23 May 2012 at 20:01
၀ါသနာ၊ စေတနာ၊ အနစ်နာ အပြင် ဂရုဏာ စွက်လို့ တပည့်တွေအပေါ် ထားတဲ့ ဆရာဟန့်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားလို့မဆုံးပါဘူးဗျာ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းကတော့ စီးပြီးရင်း စီးရင်းမို့ သက်ပြင်း ခဏ ခဏ ချမိပါရဲ့... ဆရာရေ။
23 May 2012 at 20:44
ဆရာရေ အရမ်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်ပါပဲ။ကလေးတွေက
အတုခိုးမှားနေကြတာပါ။ကောင်းတာကြရင် အတုမခိုးကြဘူး မကောင်းတာဆို အတုခိုးတာမြန်မှမြန်။ဒီပို့စ်လေးကို အတုခိုးမှားနေတဲ့ လူငယ်လေးတွေကို ဖတ်စေချင်လိုက်တာ။
ဆရာ့ပို့စ်ကို ကူးသွားပြီး စာနည်းနည်းဖတ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ပေးဖတ်လိုက်ဦးမယ်။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း ကျောင်းသားတွေက သိမှတ်ပြုရှာပါတယ်။ "ဆရာတို့က ပြောလိုက်ရင် ပိဿာလေးနဲ့ ဘေးပစ် ဆိုသလိုပဲ။ ".. တဲ့။ ကျွန်တော်က ကိုရွှေထူး ကာတွန်းထဲကအတိုင်း ပြန်ပြောဖြစ်တယ်။ ဆရာတို့ ပစ်ချင်တာ ဘေးကို မဟုတ်ဘူးကွ လို့။း)
23 May 2012 at 21:22
24 May 2012 at 02:37
ဟုတ်တယ်ဆရာ ခုခေတ်ကလေးတွေကို ပြောရဆိုရခက်ကိုခက်တာ..။ တခါတခါ အကုန်ဖမ်းပြီး ခြောက်လတန်သည် တစ်နှစ်တန်သည် စခန်းသွင်းပစ်လိုက်ချင်တယ်..။
24 May 2012 at 03:07
ဦးဟန်ကြည်ရဲ့ ဒုတ်ထိုးအိုးပေါက် အရေးမှာ မျှောသွားပါတယ်ရှင့်
ဒါပေမဲ့ တပည့်တွေအပေါ် စေတနာထားလို့ ပြောတာမို့ တမာလိုမခါးဘဲ သကြားလိုချိုပါတယ်လို့...
ပိုစ့်၁၀၀မှသည် ၁၀၀၀ , ၁၀၀၀၀ စသဖြင့် များစွာ များစွာရေးနိုင်ပါစေဆရာရေ့...
24 May 2012 at 05:18
ဆရာ မောမယ်ဆိုလည်း မောလောက်ပါပေရဲ့ဗျာ...
သို့ကလို အမောခံပြီး ဆုံးမနေတာကိုဘဲ ကျေးဇူးတင်ဦးမည်
အဲလိုမှ မလုပ်လို့ကတော့ သင်း တို့လေးတွေက ဘယ်လွယ်လိမ့်မည်တုန်း နုတုန်းထောင်းကာမှ လက်ပါးစပ် အညောင်းသက်သာမယ် ဆရာရေ့..။
24 May 2012 at 06:16
တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်ပါပဲ..လူငယ်တွေ သိသင့် ဖတ်သင့် တဲ့ အကြောင်းအရာတွေပါ..
အိမ်မက်တို့ လဲ လူငယ်ဆိုပေမယ့် ဒါမျိုးတွေ သဘောမကျလှ..
ဦးပြောသလို ဒီခေတ်ယောက်ျားလေးတွေလဲ ဟိုမရောက်ဒီမရောက်..
မိန်းကလေးတွေလဲ ကိုယ့်တန်ဖိုး ကိုယ်မထိန်းနဲ့..လူငယ်အချင်းချင်း သက်ပြင်းချနေရပါတယ်..ဦးဟန်ကြည် ပြောတာမလွန်ပါဘူး..ဒီထက်လဲ ရေးပါဦး...ဦးရေ..
ပန့် ကေ ထားတယ် ဆိုတာတော့ နည်းနည်းလွန်တယ်ဆရာ။ Formal အားဖြင့်လည်း ဘယ်နေရာမှ တိုးလို့ ဝင်တာလည်း မဟုတ်။ ဘောင်းဘီဖင်ပြုတ်တာတော့ ဆရာမြင်တဲ့ အတိုင်း ထိုင်းတွေက အဲ့လိုချည်းများတယ်။ သို့ သော် စမတ်ကျကျ ရုံးသွား၊ ကျောင်းတက်တဲ့သူတွေကျ သူ့ ဟာ နဲ့ သူ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ပါပဲ။
လူငယ်တွေကလည်း အတုခိုးမယ်ဆို မဟုတ်တာပဲ ခိုးတတ်ကြသလား မပြောတတ်တော့ဘူး။
စာမရေးတာကြာလို့ အားပါးတရ ပေါက်ကွဲထားတာပဲ.. :D.. ဆရာရေ..ခေတ်ကိုက ဆုတ်ခောတ်ကိုး... အရင်က နောက်ကျမှ လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကို အခုမှာ တဖြည်းဖြည်းချင်း ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ လုပ်တတ်လာကြတာပေါ့... ကျွန်ုတော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးကိုမြှင့်တင်ဖို့ အဓိကကျတယ်ဗျာ..... မနေ့က သမ္မတအကြံပေးရဲ့ စကားကို နားထောင်မိပြီး... တော်တော့်ကို စိတ်ကုန်စိတ်ပျက်သွားပြီ... ပညာရေးစနစ်ကေင်းကောင်းတစ်ခု၊ နိုင်ငံကောင်းကေင်းတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်မယ့် အစိုးရတစ်စုဆိုတာ ဘယ်လိုမှ ယုံကြည်လို့မရတော့ဘူး.. အဲဒီတော့.. ဆရာရေ... ဒုံရင်း Will be ဒုံရင်းပဲ ဖြစ်နေဦးမှာပါ..း)
24 May 2012 at 19:14
အဲဒိကလေးတွေထဲမှာ သား မပါဘူးနော်
သားက လိမ္မာတယ် အဟဲ
25 May 2012 at 06:09
long waiting for your post. carry on Saya.
with rgds/nang myint
25 May 2012 at 07:46
အားရပါးရ ဖတ်ခဲ့တယ် ဆရာရေ
အနာဂတ်ရဲ့မျိုးဆက်သစ်လေးတွေ အတွက် ရင်မော့ပါ ဆရာဟန်ရယ်..
26 May 2012 at 09:20
ကလေးတွေကို ပြောမရဘူးဆိုပြီး ပစ်မထားပဲ အမုန်းခံ အာညောင်းခံပြီးဆုံးမပေးနေတာ ဆရာ့လိုလူမျိူးတွေများကြီး ရှိပါစေ ဆုတောင်းပါတယ်...
26 May 2012 at 22:55
ပုံတွေကိုသဘောကျတယ်လို့အရင်ပြောပါရစေ ကိုဟန်ကြည်။ အရေးအသားတွေကတော့ ဘယ်တော့မှ မပြောင်းလဲဘူး။ လက်သံရော၊ နှုတ်သံရော ပြောင်ပါ့ဗျား။ စေတနာတွေပြင်းထန်လာရင် အဲဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်နားလည်ပါရဲ့ဗျာ။ ခုခေတ်ကလေးတွေ အတတ်များနေတာကတော့ သင်ယူစရာတွေကလည်း များနေတာကိုးဗျ။ ဒါပေမဲ့ ကောင်းတာကို မသင်ဘဲ မကောင်းတာကိုသာ ပိုနှစ်ခြိုက်ကြတဲ့ လူ့သဘာဝအရ မကောင်းတဲ့ဘက်သာ ခြေဦးက ပိုလှည့်ကြတာကိုး။ အမှန်ကတော့ ရှေ့ကနေ မကောင်းတာဦးဆောင်လမ်းပြနေသူတွေကို အရင် နှိပ်ကွပ်ပစ်လိုက်ရမှာဗျ။ တစ်ပိုင်းငြိမ်းတာပေါ့ဗျာ။ အခုတော့ အဲဒီလို တစ်ပိုင်းမငြိမ်းနိုင်ဘဲ အားပေးအားမြှောက်ပြုသလိုလို၊ တားမြစ်သလိုလိုနဲ့လုပ်နေတော့ တချို့ဆို အဲဒီလို လုပ်မှပဲ လူရာဝင် ထမင်းစားရသလို ဖြစ်နေပြီ။ နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ့်ဘာသာရေငုံနှုတ်ပိတ်လုပ်ရင်း ကိုယ့်ဘာသာပဲ တစ်ပိုင်းငြိမ်းနေရတော့တာပါပဲ။ ကျွန်တော်လည်း တော်တော်မအားလို့ လာမလည်နိုင်တာ နားလည်ပေးပါဗျာ။ တောင်းပန်ပါရဲ့။
2 June 2012 at 21:27
အင်မတန်ကို..ထိထိမိမိနဲ့ 'ဒဲ့'မို့.ကျွန်တော်တော့ဖြင့်..သဘောခွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လူပျိုပေါက်အရွယ်က..ဆံပင်ရှည်ထားရင်ပဲ..လမ်းသရဲလို့သမုတ်ခံရသလိုပေါ့ဗျာ....အိမ်ကညီတော်မောင်လဲ...ဂျယ်တွေအပြွတ်လိုက်ခေါင်းမှာသုတ်ပီး.ခေါင်းမွေးထောင်ထားတာကိုလဲ...အင်မတန်ကိုမှ..မျက်စိဆံပင်မွှေးဆူးနေရတယ်ဗျာ....
5 June 2012 at 01:59